Posted by: chhepyastra weekly | जुलाई 30, 2011
शान्ति र संविधान अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो
सीपी गजुरेल, ‘गौरव’, सचिव- एनेकपा -माओवादी
० तपाईंहरूले मन्त्रीको लागि सिफारिस गर्नुभएका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सपथ ग्रहण गराउन मानेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा अब के गर्नुहुन्छ ?
अस्तिसम्ममा सपथ ग्रहण गराइसक्ने कुरा भएको थियो तर हुन सकेन । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने’bout हामी बैठक बसेर निर्णय गर्छौं ।
० भर्खरै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीभित्र देखापरेका तमाम मुद्दाहरू सुल्झाएको हो ? तपाईंहरू एकीकृत हुनुभएको हो ?
सबै विषय केन्द्रीय समिति बैठकबाट टुङ्गो लाग्यो भन्ने त होइन तर कही विषयहरूमा भने निकास निस्किएको हो । अहिलेको मुख्य विषय भनेको कार्ययोजना र कार्यविभाजन नै हो । नेतृत्वबीचको कार्यविभाजन त भएको छ । नेतृत्वको सामूहिक अभिव्यक्ति दिने खालको कार्यविभाजन सहमतिबाट गरिएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले अगाडि भाद्र १४ गतेसम्मको लागि अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनालाई संशोधनसहित पारित गरेको छ । तत्कालको लागि पार्टी त्यही कार्ययोजनामा अगाडि बढ्छ ।
० तर, केन्द्रीय समिति बैठकपछि नेतृत्वबीच झनै मनमुटाव बढ्यो भन्ने बाहिर प्रचारमा आइरहेको छ नि, वास्तविकता के हो बताइदिनुस् न ?
बाहिर जे प्रचार भइरहेको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । केन्द्रीय समिति बैठकभन्दा अगाडि पार्टीभित्र नेतृत्वको कार्यविभाजन र कार्ययोजना’bout जुन बहस थियो, त्यो अहिले टुङ्गएिको छ । त, पनि हाम्रा वैचारिक, राजनीतिक मतभेदका विषयहरू त छादैछन । ती विषयमा छलफल हुादै जान्छ । हामीले प्रस्तुत गरेको विधिअनुसार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
० आगामी भदौ १४ सम्म तपाईंहरू शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामै केन्दि्रत भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
शान्ति र संविधान निर्माण नै अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो । यो एजेन्डामा अगाडि नबढ्ने त कुरै हुादैन । त्यसको साथसाथै हामीले आन्दोलनको पनि तयारी गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा आन्दोलन हुन्छ र ? वषर्को समय नेपालमा आन्दोलन नै हुादैन । पार्टी शान्ति, संविधानसहित संगठनात्मक तयारीमा दृढताका साथ लागिरहेको छ ।
० प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ, यस्तो अवस्थामा बजेट पास हुने, सरकारलाई सहज हुने अवस्था आउला त ?
झलनाथजीले राम्रो तरिकाले सत्ता साझेदार दलहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुभएन । उहााले सपथ ग्रहण गराएर यो सरकारलाई दह्रो बनाउन सक्नुभएको भए बजेट पास हुन्थ्यो होला । उहााले सरकारलाई नै पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन, जसले गर्दा अब के हुने हो भन्नेमा अनिश्चितता छ ।
० तपाईंहरूकै समर्थनमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो तर अहिले उहााबाटै यस्तो धोका हुादा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?
हामीले जसरी झलनाथजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौ, त्यसअनुसारको भूमिका उहाले खेल्न सक्नुभएन । जुन ढङ्गले उहाको भूमिका देखिनुपथ्र्यो, त्यसो नभएको अनुभूति हामी सबैलाई भएको छ ।
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने वातावरण बनेको छैन, यस्तो अवस्थामा कााग्रेस प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई सपथ गराउन सकिरहेका छैनन्, यसले त मुलुकलाई फेरि अन्योलतातर्फ लादैन र ?
अहिले देखिएको परिघटनाहरूले मुलुकलाई अन्योलतातर्फ लगिरहेको छ । नेपाली कााग्रेसले बेला न कुबेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ, यसले मुलुकलाई थप अन्योलतातर्फ लाने निश्चित छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएको छ तर पारित भएको छैन । बजेट पारित नै नभई यो सरकार ढल्यो भने यही बजेट नयाा सरकारले पारित गराउाछ कि नयाा बजेट ल्याउाछ भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ, जसले गर्दा मुलुक अन्योलतातर्फ गइरहेको महसुस हुन थालिसकेको छ ।
० अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छैन, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आयो भने उही माधव नेपालको समय दोहोरिादैन र ?
माधव नेपालकै जस्तो अवस्था दोहोरिने सम्भावना छ । अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको स्पष्ट खाका बनेको छैन । यो अवस्थामा झलनाथजीले राजीनामा दिए पनि तुरुन्तै अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना देखिादैन । अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा नै निश्चित छैन ।
० यस्तो अवस्थामा अन्य दलहरू शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्ध देखिादैनन् तर तपाईंहरू भने शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ नि ?
एकातर्फ शान्ति संविधानको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ छुट्टै काम गर्ने स्थिति यहाा देखापरिरहेको छ । शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको सम्पूर्ण दोष हाम्रो पार्टीलाई लगाउने शान्ति र संविधान निर्माणभन्दा सरकार गठन र विघटनमा जोड दिने काम भइरहेको छ । को शान्ति र संविधानको विरोध छ भन्ने कुरा जनताले विस्तारै बुझ्छन् ।
० पछिल्लो पटक तीन महिनाको लागि थपिएको संविधानसभाको म्याद सकिन अब एक महिना मात्र बााकी छ, योबीचमा संविधानको कुनै खाका आउने सम्भावना छ त ?
संविधानको मस्यौदा बनाउन नसकिने त होइन, बनाउन सकिन्छ । तर, त्यसको लागि राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुनुपर्छ । कुन विषयलाई संविधानमा प्रमुखताका साथ राख्ने, विषयगत समितिबाट आएका मुख्य विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । यो विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न सक्यो भने संविधानको एउटा खाका प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
० केन्द्रीय समिति बैठकले सेना समायोजनसम्बन्धी कुनै ठोस निर्णय गरेको छ कि छैन ?
सेना समायोजनको सन्दर्भमा पार्टीको पुरानो निर्णय यथावत् छ । मोडालिटी तयार नभई सेना समायोजनको काम कसरी अगाडि बढ्छ । रद्द मोडालिटी तयार भएपछि मात्र सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । पहिला मोडालिटीमा सहमति हुनु जरुरी छ ।
० अहिले न विशेष समितिको बैठक बस्न सकेको छ न सदन चल्न सकेको छ, न सरकारले नै आˆनो कामकारवाही प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेको छ, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले शान्ति र संविधान लागि मरिमेट्नुको कुनै अर्थ रहन्छ र ?
शान्ति र संविधान त अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो । नया संविधान बनाउनकै लागि संविधानसभा बनेको हो । शान्ति र संविधानलाई छोड्ने कुरै हुादैन । यिनै अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो । हामीले आˆनोतर्फबाट शान्ति र संविधान निर्माणको लागि सक्रिय भूमिका खेलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० तपाईंले अस्ति मात्र एक कार्यक्रममा संविधानसभाको म्याद छोटो भयो भन्नुभएको थियो, के फेरि पनि संविधानसभाको म्याद पटक-पटक थप्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, तपाईंहरू ?
हामीले संविधानसभाको म्याद पहिल्यै छोटो गरिदिएको हुनाले संविधानसभाको म्याद पटक-पटक थप्ने भनेर जनतामा आक्रोश, अन्योल र अविश्वास बढेर गयो । समय थप्न नपर्ने गरी हामीले पहिल्यै समय निर्धारण गरिदिएको भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुने नै थिएन । संविधानसभाको म्याद पहिलो पटक दुई वर्षभन्दा त्यो अव्यवहारिक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । किनकि यो समयमा संविधान पनि बनेन शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पनि पुगेन ।
० तपाईंले यसो भनिरहादा विपक्षीहरूले त माओवादी संविधानभाको म्याद लम्ब्याउन चाहन्छ, शान्ति र संविधानमा प्रतिबद्ध हदैन भनेर आरोप लगाउलान् नि ?
उनीहरूको आरोप गलत सावित हुादैछ । शान्ति र संविधान निर्माणको लागि हामी सक्रियरूपमा लागिरहेका छौ । को शान्ति र संविधानको पक्षमा छ भन्ने कुरा त व्यवहारबाट पुष्टि हुादैछ ।
० भनेपछि तपाईंहरू यही संविधानसभाबाट जनताको संविधान ल्याउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ?
संविधानसभाबाटै शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा हो, त्यसलाई छोड्ने त कुरै आउादैन । यही राजनीतिक एजेन्डामा हामी अगाडि बढ्ने हो ।